Misika yepamusoro muSpain | Kufamba Nhau
Misika yepamusoro muSpain
Maria | | Vhiki, Kufarira
El Rastro de Madrid, musangano usingakanganwiki pane chero Svondo
Kunyangwe paine kukura mukati mekutengeserana kwepamhepo, misika yechinyakare inochengeta runako irwo rwunovaita nzvimbo inonakidza zvakadaro yekuenda zvavo uye kuwana hupfumi chaihwo. Famba famba, enzanisa uye utenge… Tinoda misika! Ndokusaka mune inotevera posvo tinokupa iwe imwe inotonhorera muSpain iyo vhiki rega rega inokwezva mazana evashanyi.
1 Musika weNavacerrada
2 Trace yeMadrid
3 Motokari Musika
4 Els inopinda
6 Alcaicería yeGranada
7 Mestalla musika
8 Vhura yako Ganbara
Vanoda zvinhu zvekare uye zvechipiri-ruoko vane musangano musangano weNavacerrada flea musika Svondo yega yega. Inowanikwa paPaseo de los Españoles s / n, mune imwe nzvimbo yekunze zviri nyore kutarisa mepu yemamiriro ekunze usati washanyira iyo kuitira kana kuchitonhora kana kupisa. Pano iwe unogona kuwana matoyi, tafura, pendi, mawachi, zvifananidzo, marambi, vinyls, fanicha ... chirongwa chakanakisa chekunakirwa nemakomo eMadrid.
El Rastro musika wekufananidzira muMadrid une makore anopfuura mazana mana enhoroondo uko iwe kwaunogona kuwana mhando dzese dzezvinhu zvezuva nezuva, zvekare uye zvekutengesa. Iwo musika wekuzeya wakashama uyo unoitwa neSvondo uye mazororo munzvimbo ine nhoroondo yeguta, munzvimbo yepakati peLa Latina, kunyanya paRibera de Curtidores mugwagwa.
Mimwe yemigwagwa yakatenderedza Ribera de Curtidores yakatsaurirwa kutengesa zvimwe zvigadzirwa zvakasarudzika senge hunyanzvi, mabhuku, magazini, masitikita, zvekare uye kunyange mhuka.
Kunyangwe vanhu vazhinji avo dzimwe nguva vanoumbika mune dzimwe nzvimbo, zvinofadza kwazvo kupedza Svondo mangwanani uchishanyira matumba eRastro kuti upedze imwe migove uye tapas mumabhawa akapoterera.
Mufananidzo | Telemadrid
Kupera kwevhiki kumwechete pamwedzi, chiteshi chekare chechitima cheDelicias, chekutanga chikuru chinovakwa muMadrid uye icho nhasi chine dzimba dzeRailway Museum, dzimba dzinoverengeka dzakatemerwa fashoni, kushongedza uye gastronomy. Iyo zvakare ine nzvimbo uko vanhu vanotengesa zvinhu zvavasingachashandise asi zvakanyatsorongedzwa.
Uye zvakare, iyo Mercado de Motores mukana wakanakisa wekuziva zvemukati memuseum, imwe yeakakura maindasitiri ekuvaka zvivakwa kubva muzana ramakore rechiXNUMX izvo zvichakamira muMadrid. Inowanikwa paPaseo de las Delicias, 61 uye zvakare ine nzvimbo yekudyira kwaunogona kunakirwa nekudya tudiki uchinakidzwa nemumhanzi wakanaka.
Iyo dels Encants musika muBarcelona, ​​inozivikanwawo seMercat Fira de Bellcaire, ndiyo hombe uye dangwe muguta. Iri paAvinguda Meridiana, 73 uye inoitika neMuvhuro, Chitatu, Chishanu neMugovera.
Kwete chete iwe yaunogona kuwana ese marudzi ezvinhu zvezvinhu pano, asi zvakare maokisheni akarongeka uye huwandu hwakazara hwekuwedzera masevhisi anopihwa, senge gastronomy. Izvo zvinoshamisa zvechikafu chemumugwagwa zvakauyawo kumusika uyu weBarcelona kuitira kuti vashanyi vanakirwe nendiro dzinonaka munzvimbo kana kuenda nadzo kumba mushure mezuva rakasimba rekutarisa matanga. Senge sekunge izvo zvaive zvisina kukwana, kune zvekare kune zvedzidzo uye zvekuvaraidza zviitiko zvemarudzi ese kumazera ese.
Mufananidzo | Cugat.cat
Kufamba-famba kuburikidza neMercantic musi weSvondo mangwanani kupinda mumusha wedzimba dzine pastel mavara ayo anoita kunge akatorwa kubva ku Instagram. Vateveri veKushongedza kweVintage vanozowana muMercantic nzvimbo yavanogona kuwana zvidimbu zvakasarudzika uye zvinonakidza zvemidziyo yekare uye zvinhu zvakadzorerwa. Kune vamwe zvakare vanogadzira yavo yavo dhizaini uye mashopu akatogadzirirwa kune anonyanya kubata ruoko.
Chitoro chemabhuku cheEl Siglo chinoshamisira kwazvo, uko makonzati uye mavermouth akarongeka nechiratidziro uye kutengeswa kwezviuru zvemabhuku ekare neasekondi. Mercantic yakavhurika mazuva ese uye iri kuAv. De Rius i Taulet, 120, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Munguva dzeAl-Andalus yaive musika wamambo weGranada umo silika nemhando dzese dzezvigadzirwa zvakagadzirwa. Mushure mekukundwa kwakaramba kuri nzvimbo yakakosha yekutengesa asi yakanga ichiderera kusvika muzana ramakore rechiXNUMX payakatambura moto mukuru. Parizvino inogara nzvimbo shoma pane yepakutanga asi ichiri kungowanikwa zvakaenzana nevagari uye vashanyi. Inovhura mazuva ese kusvika na21 manheru paAlcaicería Street.
Ndiyo musika unozivikanwa weValencian pakati pevadi ve retro uye mazambiringa. Iyo inoisirwa Svondo yega yega uye pazororo muMestalla nhandare yemotokari. Mu2019 ichave nenzvimbo nyowani mushure mekupfuura neAlameditas de Serranos, iyo Naples neSicilia square uye, parizvino, pakati peAragón neSweden nzira, padhuze nenhandare yeMestalla. Mumusika uno, zvekare, zvishandiso, zvinyorwa, mifananidzo, mbatya uye zvese zvinhu izvo munhu anogona kufungidzira zvakasanganiswa.
Mufananidzo | Vhura nzvimbo
Vhura yako Ganbara
Musika wemazuva ano uye wekugadzira uri munzvimbo yakasarudzika senge yekare Artiach kuki fekitori. Vhura Yako Ganbara, chirongwa chitsva chinoitika munzvimbo dzakagadziridzwa kuunza huwandu hwakazorora, fashoni, hunyanzvi uye tekinoroji kune vese vateereri. Pano, vanamuzvinabhizimusi vanoburitsa yavo mhando uye dhizaini asi pakati pematafura iwe unogona zvakare kununura chimwe chakasarudzika uye chemazambiringa chinhu. Vhura yako Ganbara yave iri muLa Ribera de Deusto / Zorrotzaurre nharaunda kubvira 2009.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Kufarira » Misika yepamusoro muSpain
Iyo Dome reDombo
Kuchinja kwemurindi muLondon